Qalin Jabintii 6aad ee Ciidanka Cusub ee Booliska Degaanka – Rasaasa News
Qalin Jabintii 6aad ee Ciidanka Cusub ee Booliska Degaanka
Sep 3, 2011 Qalin Jabintii 6aad ee Ciidanka Cusub Booliska
In ka badan 1,590 oo ciidamada cusub ee Boliiska ah oo tababar u socday sagaal bilood loo xidhay. Waa ciidankii 6aad oo dhamaysta tababar tan iyo intii la aas aasay ciidamada cusub ee Booliska sanadkii 2006.
Ciidanka cusub ee booliska oo tiradooda lagu qiyaaso 10 -15 kun [10,000-15,000], ayaan wali wada kaabin hawlaha nabad galiyada ee ay ka hayaan degaanka Somalida, kaas oo aad u balaadhan, ahna degaanka 2aad ee ugu weyn xaga dhulka degaanada Ethiopia.
Ciidanka cusub ee booliska, ayaa isbadal weyn oo dhanka nabad galiyada ah keenay degaanka Somalida Ethiopia. Dhinaca kale waxay dhibaatooyin badan ku hayaan shacabka degaanka ee ka durugsan xarunta maamulka.
Ciidanka cusub ee booliska ayaa si toos ah waxay u hoos tagaan madaxweynaha degaanka Somalida. Arintaas oo xoojisay awooda madaxweynaha maadaama ay masuuliyiinta booliska si gaar ah ugu xidhan yihiin iyo isaga oo ka mid ahaa raga aas aasay ciidanka, fikirka lagu aas aasayna waxaa lahaa xubo hore uga tirsanaan jiray ururkii ONLF, oo khilaafkii ka dhex dilaacay ururka u galay Ethiopia.
Ciidanka cusub ee booliska oo ay jirto baahi badan oo loo qabo in la kordhiyo tiradooda, ayey dawladu doonaysaa in ay yarayso. Waxaadna ku arkaysaa gabalada dalka dhalinyaro shaqo doonad ah oo ku soo ururaya xafiisyada booliska iyaga oo doonaya shaqo.
Xooginta iyo badinta tirada ciidanka boolisku waxay wadada u xaadhaysaa isbadal sharci iyo dawladnimo oo ka hirgala degaanka Somalida oo aan u laylyanayn hanaan dawladnimo.
xiligan la joogo shaqaalaha ugu badan ee degaanka mushaar qaata waa ciidanka cusub ee booliska, kuwaas oo xaasaskooda iyo caruurtooduba ay heli doonaan fursado magaalo oo horumar ku soo kordhisa degaanka Somalida.
Dhinaca kale ciidanka cusub ee boolisku waxaa uu haystaa tababar fiican, laakiin waxay baahi weyn u qabaan qalabkii ay ku hawlgali lahaayeen sida; noocyada kala duwan ee hubka iyo gaadiidka. Qalab la,aanta Ciidanka boolisku waxay keentaa in ay dhacaan marar badan gaadiidka shacabka, taas oo lid ku ah wixii loo abuuray oo ah in boolisku ilaaliyo nafta iyo hantida wadaniyiinta.
Waxaa la isweydiin karaa ama aan la saadaalin karin waxa uu noqon doono mustaqbalka Ciidanka cusub ee boolisku, ka dib kolka ay dhamaato ujeedadiii loo abuuray oo ahayd la dagaalanka ururada mucaaradka.
Shakigaasi waxaa uu iman karaa kolka la eego qalabayn la,aanta ciidanka ka hawlgala degaanka, oo runtii ah mid hantay nabad galiyada degaanka Somalida, laakiin ay qalabayn la,aani u gayso xoogida gaadiidka shacabka.
Cashadii Ugu Caajiska Badnayd oo ay Wada Cuneen M/weynaha Xiligan iyo M/weynihii Hore ee Degaanka
Shugri Ilbir iyo 13 Kale oo la Socday oo Salal Lagu Dilay